Lørenskog: Hooyo labo(2) wiil oo ay dhashay ceejis ku dishay oo 21 sano lagu xukumay. - NorSom News
Home Nyheter/Warcusub Lørenskog: Hooyo labo(2) wiil oo ay dhashay ceejis ku dishay oo 21...
Maxkamada magaalada Oslo ayaa 21 sano oo xabsi ah ku xukuntay hooyo dhalinyaro ah oo lagu helay danbi ah inay ceejis ku dishay labo wiil oo ay dhashay. Falkan ayaa xagaagii sanadkii hore ka dhacay degmada Lørenskog ee duleedka magaalada Oslo.
Labada wiil ayaa da´ahaan kala jiray 7 sano iyo hal(1) sano.
Haweeneyda la xukumay ayaa maxkamada ka hor sheegtay ineysan xusuusan dilitaanka labadeeda wiil, balse waxey qiratay in xiliga uu dilkaas dhacay ay iyadu kaligeed guriga la joogtay wiilasheeda.
Haweeneydan ayaa ilaa markii ay boolisku soo qabteen waxey ku jirtay isbitaalka dhimirka ee lagu hayo dadka maskax ahaan xanuunsan ee danbiyada geysta.
Waxey isku deyday inay danbiga dilka aabaha wiilasha dusha ka saarto:
Haweeneyda la xukumay ayaa sidoo kale lagu eedeeyay inay markii hore isku deyday inay danbiga dilka caruurta dusha ka saarto aabaha caruurta oo ay kala tageen. Waxeyna boolisku u sheegtay in aabuhu uu caruurta dilay, iyadana uu u geystay dhaawac.
Booliska oo ku howlgalaya warbixintaas ayaa xabsiga dhigay aabaha, iyaga oo kusoo oogay danbi ah inuu caruurta dilay. Laakiin waxey saacado kadib kasoo daayeen xabsiga, kadib markii ay sameeyeen baaritaano dheeri ah, ayna ogaadeen in hooyadu ay dilka caruurta ka danbeysay.
Aabaha la xiray ayaa boolisku u sheegay in maalinta caruurta la dilay uu u jarnaa tigid dalxiis ah, oo uu rabay inuu labada wiil ee la dilay uu fasax dibadda ugu kaxeeyo. Wuxuuna xiliga ay boolisku guriga ugu imaadeen, ayna xireen uu kujiray isku diyaarinta safarka uu ku bixi lahaam isaga oo halmar ka war helay dhimashada wiilashadiisa, iyo inuu yahay eedeysane.
Xigasho/kilde: Mor (36) dømt til 21 års fengsel for drap på sine to barn.
Previous articleMa degantahay Stavanger iyo nawaaxigeeda, fursadan caruurtaada uga faa´iidee.
Next articleNAV ayaa ku tiri: Uma baahnid koronto ee raadso birta dhuxusha(grill) si aad cunto u karsatid.